Akụkọ - A ga -eziga 37 Ton Container side lifter na Kenya
A ga -eziga onye na -eburu akụkụ ihe mkpofu Ton Ton na Kenya
Ọ bụ oge mbụ onye ahịa anyị Kenya zụtara ihe mbuli akụkụ 37ton n'aka CCMIE, onye ahịa ahụ ka tụkwasịrị CCMIE obi nke ukwuu. Onye njikwa ahịa anyị mere naanị nkọwa zuru ezu maka onye ahịa ịhọrọ site na, dịka mkpa onye ahịa si dị, anyị na -akwado ya onye na -ebuli akụkụ akpa kacha mma.
N'ezie, mgbe o zigasịrị onye ahịa ihe osise ahụ maka ntụnyere ya, onye ahịa ahụ mere ezigbo mgbanwe. N'ihi na onye ahịa ahụ azụtala ụgbọala na -adọkpụ akụkụ site n'aka ndị na -ebubata ya na mbụ. Mgbe onye na -adọkpụ ụgbọala n'akụkụ onye na -adọkpụ anaghị arụ ọrụ nke ọma, onye na -ebubata ya enyereghị ya aka idozi ya ma leghara onye ahịa anya. Nke a na -eme onye ahịa ahụ ezigbo iwe. Yabụ na ndị ahịa na-echegbu onwe ha nke ukwuu maka ọrụ ịre ahịa na nsogbu dị mma. Anyị ghọtara nchegbu ndị ahịa anyị nke ọma. Anyị na-agwa ndị ahịa anyị na anyị nwere sistemụ zuru oke mgbe erechara ahịa.
Ndị ọrụ anyị mgbe ịre ahịa na-aza ajụjụ gị n'ịntanetị 24 awa n'ụbọchị. Enwere vidiyo na akwụkwọ ntuziaka ga -enyere gị aka ịrụ ọrụ, anyị na -enyekwa ndị ahịa vidiyo ọrụ ndị ahịa ndị ọzọ. Ya mere echegbula onwe gị maka nsogbu ịre ahịa gachara. Ndị otu ọkachamara na -edozi anyị.
A na-eji gwongworo CCMIE Container na-ebu onwe ya maka ibupu na ibupu ihe.
Ihe mkpuchi akụkụ CCMIE na -edobe ọtụtụ uru, ọkachamara na -ebufe, ịdị arọ nke obere
Arụmọrụ dị elu, nhọrọ mbuli elu, nrụgide ala dị ala & nkwụsi ike dị elu
Ejiri trailer ma ọ bụ gwongworo.
Anyị kwenyesiri ike na mgbe mgbanwe mbụ anyị, na imekọ ihe ọnụ na-esote, site na mbọ anyị na-agba, imekọ ihe ọnụ ahịa n'etiti anyị ga-ewetara ụlọ ọrụ anyị abụọ uru, uru ibe na nsonaazụ mmeri. Anyị, CCMIE, nwere ike nye gị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ dị elu, wee nye trailer trailer na-ebu ngwongwo 3 nke axis na igwe ọhụrụ na Papua, Solomon Islands na mba ndị ọzọ na ọnụ ahịa asọmpi. Anyị ji ezi obi na -atụ anya ịkwado ndị nkesa na ndị ọrụ na mba niile. . Anyị chere na anyị nwere ike igbo mkpa ngwa agha gị. Anyị na -ejikwa obi ụtọ anabata ndị na -azụ ahịa na ngalaba nrụpụta anyị iji zụta ngwọta anyị.
Ọ bụrụ na ị nwekwara mmasị, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị！
Oge ezipụ: Aug-26-2021